Madheshvani : The voice of Madhesh - किसानको सम्पूर्ण भुक्तानी नदिलाएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ : राकेश मिश्र
आन्दोलरत् उखु किसानहरूका अगुवा तथा राजपा नेपालका सहमहामन्त्री
० उखु किसानहरूको आन्दोलन के हो ?
— उखु किसानहरू १५ महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र ४, जुन मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो त्यहाँ पर्दछ । चुनावपछि जब गाउँ–गाउँमा डुले र उखु किसानहरूको समस्या अध्ययन गर्दै जाँदा एकदमै जटिल र कहालीलाग्दो अवस्था थियो । आफूले मिहिनेत गरेर खुनपसिना बगाई गरेको कमाई ऋण लिएको साहुलाई तिर्नुपर्ने पीडा देखेर मैले सम्पूर्ण किसानहरूलाई भेला गराए । त्यसपछि उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही–४ गठन गर्न लगाएँ । त्यसपछि हामीले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आयौं । त्यस क्रममा हामीसँग पाँचबुँदे सम्झौता पनि भएको थियो ।
० तत्कालीन अवस्थामा भएको पाँचबुँदे सहमतिमा के थियो ?
— तत्कालीन अवस्थामा हामीले गरेको सम्झौतामा असारमसान्तभित्र किसानहरूको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिने, उद्योगीहरूले विगत पाँच वर्षदेखि राखेका पैसा असारमसान्तभित्र गरिने, चालू आर्थिक वर्ष र बाँकी सम्पूर्ण रकम कार्तिक मसान्तभित्र गरिनेछ भनेर भनियो । तर त्यो कार्यान्वयन भएन । म दिनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योगीको घर जान्थे तर उनीहरू आलटाल गरिरहे । सबै किसानहरूको पीडा हेरेर बाध्य भई हामीले काठमाडौंंकेन्द्रित आन्दोलन थाल्यौं । आन्दोलनमा काठमाडौंका नागरिक समाज, मधेशी समुदाय, मिडिया र विद्यार्थीहरूको उत्साहकजनक सहभागिताले सरकारलाई दबाब पर्न थाल्यो । किसानलाई राज्यले कहिल्यै पनि मान्छे नै ठान्दैनथे । हाम्रो आन्दोलनमा मिडियाको ठूलो सहयोग रहेको छ ।
० यो काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको क्रममा बुधबार सरकारी पक्षसँग वार्ता पनि भएको छ, के आयो निष्कर्ष ?
— विभिन्न पक्षबाट सरकारमाथि दबाब पर्न थालेपछि बुधबार सरकारले हामीलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो । हामी सिंहदरबारमा वार्ता गर्न जाँदा किसानका ११ बुँदे मागसहित हामी सरकार सामु प्रस्तुत भएका थियौं । २०७० सालदेखि हाल २०७६ सालसम्मका सम्पूर्ण भुक्तानी तुरून्तै गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको ५३६ रूपैयाँ तोकेको छ तर मिल मालिकले केही मानिसलाई बोलाएर बलजफ्ती ५०० रूपैयाँ मात्र तोके । तर, हामीले ५३६ रूपैयाँ नै तिर्नुपर्ने माग राख्यौं । किसानले उखु मिलमा पु¥याएको ३६ घन्टाभित्र तौल गरिसक्नुपर्छ । त्यसैगरी, किसानले जुन दिन तौल गराउँछ त्यसको १५ दिनभित्र एकमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई खारेज गरेर जसको हातमा पुर्जी छ उसको खातामा पैसा सिधै पठाउनुपर्छ । हामी कहाँ मल, बीउका लागि मल, खाद्य र बीउ बिक्री केन्द्र स्थापना होस् लगायतका मागहरू हामीले सरकारी पक्ष समक्ष राखेका छौं ।
० तपाइँहरूको मागप्रति सरकारी पक्षको जवाफ के थियो ?
— सबै उद्योगीहरू मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छन्, किसानहरूको समस्या समाधानका लागि दुइटा तरिका निकालेको बताए । एउटा तत्कालीन र अर्को दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने तरिका निकालेको हामीलाई बताइयो । तत्कालका लागि सरकारी अनुदान भोलीदेखि नै सहजीकरण गर्ने, परिपत्र दिने ताकि दुई÷तीन दिनमै सरकारले भुक्तानी पाओस् भनेर भनियो । त्यसपछि सरकारले हामीसँग समय मागेको छ । यो धेरै दिनको जटिल समस्या हो, १५/२० दिनको समय माग्न खोजेको थियो । तर, हामी सर्लाहीबाट काठमाडौं आउँदा पैसा दिलाएरै फर्कने भनेर आएका छौं । त्यसकारणले तत्कालै हामी भुक्तानी चाहियो भनेर भन्यौं । तर, सरकारी पक्षले जसरी किसानको पैसा दिलाउने, त्यसो नभए उद्योगीहरूको मिल सिज गरेर भएपनि भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिएको छ । सरकारबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक नै थियो । तर, बोलीमा मात्रै आएको छ त्यहीअनुसार गरिदियो भने सबैको समस्या समाधान हुन्छ । तर, हामीलाई धेरै पटक सरकारले ठगिसकेको छ । त्यसकारणले सरकारमाथि सजिलै विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।
० उखु किसानको भुक्तानी दिने सरकारको आश्वासनपछि तपाइँहरूको आन्दोलन जारी रहन्छ कि स्थगित हुन्छ ?
— अब हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ । किनभने जब सरकारले यति विश्वास दिलाएको छ कि उद्योगीहरूको घर जग्गा लिलामी गरेर भएपनि किसानको भुक्तानी दिलाइन्छ । सरकारले जुन समय अवधि दिन्छ त्यो अवधिमा किसानको खातामा पैसा जान्छ भन्नेप्रतिबद्धता दिएपछि हामीले पनि केही न केही विश्वास गर्नैपर्छ । यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौं । यदि भोली उखु किसानको भुक्तानी दिएन भने त्यसको ठोस आधार खोज्दैछौं ।
० कस्तो किसिमको ठोस आधार चाहिन्छ ?
— यदि सरकारले भनेको समयसीमामा किसानको भुक्तानी दिएन भने हामी सरकारमाथि पनि मुद्दा हाल्न सकोस् भन्ने आधार चाहिन्छ । किनभने हामीले यस्ता सम्झौता पहिला पनि गरिसकेका छौं । तर ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फेरि हामीसँग धोका नहोस् भन्ने आधार चाहन्छौं । पहिला पनि हामी अनसन बसेर सरकारी पक्षले नै सम्झौता गरेको थियो तर, कार्यान्वयन भएन । तर, सरकोकारबाला मन्त्रीले उखु किसानको भुक्तानी जसरी पनि दिलाउने जिम्मा लिनुभएको छ ।
० सरकारलाई कति दिनको समय दिनुहुन्छ ?
— हामी सबै उखु किसान साथीहरूसँग छलफल गर्छौं, सबैको राय बुझ्छौं त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौं । हामी भोलीदेखि भुक्तानी पाउनुपर्छ चाहन्छौं, तर सरकारले १०–१५ दिनको समय चाहेको छ । अहिले हामीसँग सम्पूर्ण नागरिक समाज, बुद्धिजीबी, विद्यार्थी र मिडियो साथमा छ भने हामी चुक्नु हुँदैन । तर, सरकारी पक्षबाट आएको कुरालाई हामीले सकारात्मक लिएका छौं ।
० सरकारी अनुदान पनि सरकारले दिन सकेको छैन नि ?
— सरकारी अनुदानको विषयमा सरकारले तत्कालै पहल गर्ने बताएको छ । जसको हातमा पुर्जी छ, उसको खातामा सिधै पैसा जान्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरिने बताइएको छ । बढीमा तीन दिनभित्र सरकारी अनुदानको सबै रकम किसानको खातामा पुगिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
० अब फेरि सरकारसँग सम्झौता गर्ने कि पहिला कार्यान्वयन पक्ष हेरेर आन्दोलन रोक्ने ?
— हामी त कार्यान्वयन पक्षमा विश्वास गर्छौं । पहिला पनि हामीसँग सम्झौता गरिएको थियो तर कार्यान्वयन भएन । तर, सरकार अहिले जसरी नयाँ तरिकाबाट प्रस्तुत हुन खोजिरहेको छ, उद्योगमन्त्रीले आफ्नै जिम्मा लिनुभएको छ, यसमा हामीलाई आशा पलाएको छ । सरकारी अनुदानबाट जब किसानको खातामा पैसा जान थाल्छ त्यसपछि हामीलाई विश्वास लाग्छ । सरकारले तत्कालै आफ्नो अनुदान दिन थाल्यो भने हामी ढुक्क हुन्छौं ।
० भनेपछि सरकारी अनुदान दिन थालेपछि काठमाडौं आएका किसानहरू घर फर्किने छन् ?
— यो बुहुत गम्भीर विषय हो । सबै किसानसँग बसेर छलफल गरेर अनि मात्र निष्कर्षमा पुग्छौं ।
० चार पाँच वर्ष पहिलादेखि नै जुन किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्, ठूलो ब्याजमा ऋण लिएर खेती गरेका छन् तिनीहरूको ऋण दुई तीन गुणा बढी भइसकेको होला, तिनीहरूले भुक्तानी पाएभने पनि ऋण तिर्न सक्छन् ?
— धेरै कठिन छ । उनीहरूले लिएको ऋण पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, कमसेकम किसानलाई राहत त होला । त्यो भुक्तानी पनि पाएनभने झन् दिनप्रति ऋणि हुँदै जानेछ । निर्वाचनका बेला सबै नेताहरू किसानलाई ढोग्छन्, तर मत लिइसकेपछि किसानको समस्याबारे सोध्न पनि आउँदैन । तर, अब किसान ठगिनेवाला छैन । किनकि म किसानसँग जहिले काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छु । किसानको सम्पूर्ण भुक्तानी नदिलाएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । हामीसँग मिडियाको पनि सहयोग छ । यो लामो लडाइ हो, यसमा हाम्रो विजय अवश्य नै हुन्छ । किनभने किसान हाम्रा अन्नदाता हुन् । हामी आफ्ना अन्नदाताका लागि जहिले पनि आन्दोलन गर्न तत्पर हुन्छौं ।